Valverde oo si RASMI ah u shaaciyey liiska xiddigaha Barcelona ee ka qeyb galaya koobka Spanish Super Cup – Gool FM
(Barcelona) 07 Jan 2020. Macalinka reer Spain ee Ernesto Valverde ayaa shaaciyey liiska xiddigaha Barcelona ee kaga qeyb geli doono koobka Spanish Super Cup.
Barcelona ayaa isku diyaarineysa ka qeyb galkeeda koobka Spanish Super Cup oo markii ugu horeysay ay ka qeyb qaadanayaan afar kooxood, kaddib nidaamka cusub ee la sameeyay, iyadoo sanadkan lagu ciyaari doono dalka Saudi Arabia.
Afarta kooxood ee nasiibka u yeeshay inay ka qeyb galaan sanadkan koobka Spanish Super Cup ayaa kala ah, Barcelona, Real Madrid, Valencia iyo Atletico Madrid.
Kooxda Barcelona ayaa khamiista soo aadan waxay wareega afar dhamaadka koobka Spanish Super Cup kula ciyaari doontaa dhigeeda Atletico Madrid, iyadoo kooxda soo adkaata ay kulanka finalka kula ciyaari doonto mida soo baxda Real Madrid iyo Valencia 12-ka bishan Janaayo oo ay ku beegan tahay maalinta Axada ee soo aadan.
Ernesto Valverde iyo wiilashiisa kooxda Barcelona ayaa la filayaa in galinka dambe ee maanta ay u safri doonaan dalka Saudi Arabia.
Waxaa liiskan uu ku dhawaaqay tababare Ernesto Valverde ku soo baxay dhamaan ciyaartoyda kooxda Barcelona marka laga reebo Goolhaayaha heerka caalami dalka Jarmalka ee André ter Stegen iyo xiddiga reer Brazil ee Arthur Melo, kuwaasoo ku maqan dhaawacyo kala duwan ay qabaan.
Haddaba halka hoose kaga boggo liiska xiddigaha kooxda Barcelona uu ku dhawaaqay tababare Ernesto Valverde, kuwaasoo ka qeyb galaya koobka Spanish Super Cup ee lagu qaban doono dalka Saudi Arabia.